Pyae Phyo (MMiTD): January 2012
အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် Software လေးကတော့ Tera Copy ဆိုတဲ့ Software လေး
ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက Data တွေကို ကူးယူတဲ့အခါမှာ လက်ရှိ ကူးယူတဲ့ နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေး
တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ကူးနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကွန်ပြူတာပိတ်သွား
ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်။ အခြား Program တွေကြောင့် စက်လေးပြီး ရပ်သွားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်။ Resume လုပ်ပြီး Transfer ဆက် လက်လုပ်ဆောင်ပေးတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2.4 MB ဘဲရှိတဲ့အတွက် ဒေါင်း
ယူထားလည်း အပန်းမကြီးပါဘူး။အထဲမှာလည်း Serial Key ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ Wallpaper လှလှလေးတွေကို Animation Affect လေးတွေထည့်ပြီး
အလှဆင်ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Function လေးတွေလည်း မဆိုး
ဘူးဗျ။ စုံစုံလင်လင်ဘဲ။ ရုပ်ထွက်လေးတွေလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ထုံးစံ
အတိုင်းဘဲ။ Full Version လေးဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Serial no လေးတွေပါ တခါတည်း ထည့်သွင်း
ပေးထားပါတယ်။ File Size ကလည်း 6MB ဘဲရှိပါတယ်ဗျာ။
VCD Cutter လေးတွေ့တော့ပေါတယ်ဗျ။တင်လည်းတင်ပေးပြီးသွားပြီ။ အခုတစ်ခါတော့
DVD cutter လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ အသုံးပြုရအဆင်ပြေမယ့် Version မျိုးဘဲ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 2.5MB ဘဲရှိပါတယ်။ဘယ်လိုနေ့မျိုးတွေမှာ အသုံးများလည်းဆိုရင် DVD Video
File တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာလေးတွေဘဲ ရွေးပြီးဖျတ်မယ်ဆိုရင် တော့ ဒါလေးကအသုံးဝင်ပါတယ်။
Window တက်တာမြန်စေမယ့် Hijack This
ရှိပြီးသား မိတ်ဆွေများ တော့ သည်းခံပေးပါနော် ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ Desktop
တော့မြင်နေရပြီ။ ဒါပေမဲ့ pointer က သဲနာရီနဲ့ Busy ဖြစ်နေတယ်။ Screen ညာဘက်အောက်ထောင့်က System Tray area မှာ startup program လေးတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လို့ မဆုံးနိုင်ဘူး။ စောင့်ရတာ
လည်း စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Hijack This ဆိုတဲ့ program လေးရှိပါတယ်။ install လုပ်စရာမလိုဘူး။ တန်းသုံးရုံပဲ။ သူက ကွန်ပျူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း run တဲ့ program တွေ၊ Browser
တွေမှာ အပိုဖြစ်နေတဲ့ Toolbar သို့မဟုတ် BHO (Browser Helper Object) တွေကို ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ သုံးနည်းကတော့ သူ့ကို ဖွင့်ပါ။
Internet Download Manager v6.08 Build9နောက်ဆုံးထွက် Version
အခုနောက်ဆုံးထွက်တာလေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ IDM တွေက version တွေ
ခဏခဏထွက်နေတော့ မတင်ဘူးလို့တောင်နေနေတာဗျာ။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခုလောက်တော့ ရှိထား
သင့်တယ်ထင်တော့ လည်း တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာသုံးနေတာ ဒီ Versionထက်
အများကြီးနိမ့်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်လည်းသုံရအဆင်ပြေနေတာပါဘဲ။ အခုလည်း ကျွန်တော် Full Version
လေး ဘဲတင်ပေးထားပါတယ်။ Patch File ပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Desktop Wallpaper Collection Vol-1
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Desktop မှာ
Wallpaper အလန်းလေးတွေတင်ထားချင်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တ
ချို့ User တွေတော်တော်များများတွေ့ဖူးတယ်ဗျာ Desktop ပေါ်မှာ Wallpaper လှလှလေးတွေ အမျိုးမျိုး
ပြောင်းတင်ပြီး ခဏခဏကြည့် ပြီးတော့ ပီတိတွေဖြစ်နေတက်တဲ့သူတွေများကြီးရှိတယ်ဗျာ။အဲလိုလူမျိုး
တွေအတွက်ကတော့ရှယ်ဗျာ။ပုံလေးတွေက တော်တော်လန်းတယ်ဗျ 3D ပုံတွေလည်းပါတယ်။ အစုံပါဘဲ။
Install ပြုလုပ်မရသော Software များကို Advanced Installer 8.9 လေးနဲ့ လုပ်ကြည့်မယ်
အခုတင်ပေးမယ့် Software လေးကတော့ install လုပ်လို့ မရတဲ့ Software တွေ
ကို Install လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် ကောင်လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူများတွေက Uninstaller
တင်ကြတယ်ဗျ။ တော်တော်များများကိုတွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြောင်းပြန် Installer တင်တယ်
ဗျာ။ ဒီ Software လေးက ဘယ်လိုနေရာတွေများအသုံးဝင်သလည်းဆိုရင် တချို့ Antivirus တွေမှာ Virus
ပြသာနာကြောင့် Install လုပ်လို့မရပါဘူး။ Virus ကလည်း Antivirus တွေကို Install လုပ်ခွင့် မပြုပါဘူး
Alligator Flash Designer 8.0.19 (Full Version)
အခုတင်ပေးမှာလေးကတော့ Flash နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Animation လေးတွေ Slideshow
လေးတွေ ဖန်တီးချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုမှစပြီးစမ်းသပ်လေ့လာချင်
သူများလည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုပုံလေးက လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်
အောင် ထုံးစံအတိုင်း Full Version လေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Folder ထဲမှာ Crack File လေးပါထည့်ပေး
SolveigMM Video Splitter 2.5
ဒီကောင်လေးကတော့ လူသိများကြတဲ့ Video Cutter ပုံစံမျိုးပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးက
Video File တွေကို ဖြတ်တောက်ဖို့ အတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ Software တစ်မျိုးပါ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်
အောင် Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link နှစ်မျိုးနဲ့တင်ပေးထား
Sothink SWF to Video Converter V2.4 (Full Version)
ဒီ Converter လေးကတော့ SWF to Video Converter လေးပါ။ SWF လို့ ပါပေမယ့်
ကျန်တဲ့ Format များပါ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို File Type မျိုးတွေကို Convert လုပ်ပေး
နိုင်လည်းဆိုရင်တော့ avi , ipod video (mp4) , 3gp , 3g2 , mpg , PSP Video (mp4) နဲ့ Image
series တွေဖြစ်တဲ့ (jpeg , gif , png , bmp , animated gif) စတဲ့ File Type တွေကို Convert လုပ်ပေး
ပါတယ်ဗျာ။ Full Version လေးဖြစ်အောင် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Corel Draw Graphic Suite X4 (Full Version)
Corel Draw Graphic Suite X4 လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးတည့်သူ
များလည်း ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်ဗျာ။ သူကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ ဒီဇိုင်းဆွဲချင်သူတွေ ၊ မြန်မာမှု အနုပညာတွေ
ဖန်တီးသူတွေ၊ ဒီဇိုင်းသမားတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ Design Software တစ်မျိုးပါ။ ဒီဇိုင်းကို အခုမှစပြီး
လေ့လာလိုသူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင် မြန်မာ ဘာသာပြန် အသုံးပြုနည်း EBook ကိုပါတစ်ခါ
Kaspersky TDSS Killer 2.7.0.0 (Portable)
Kespersky ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Malware Killer လေးပါ။ ကွန်ပြူတာ တော်တော်များ
များမှာ ပြသာနာရှာနေတဲ့ Win32 Virus တော်တော်များများကို အကောင်းဆုံး ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Win 32 Virus ဆိုလို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့နော်။ Win 32 အမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲဒီ အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို နိုင်နင်းတဲ့အတွက် တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ အပြင်Trojanကိုလည်း
ကောင်းကောင်းလေးနိုင်နင်းစွာရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးပါတယ်။ သူက Window Xp , Vista , Window 7
အားလုံးကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 32bit & 64bit အားလုံးကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။
အမျိုးအစား: Antivirus , Portable
Oxford English Dictionary (Portable) with Pronunciation
ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်မှတ်ချက် နံပါတ် 1 နေရာမှာ ရှိတဲ့ Oxford English Dictionary
လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က လည်း 7MB ဘဲရှိတဲ့အတွက် သွားလေရာကို Memory Stick
လေးနဲ့ သယ်ဆောင်သွားပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီး အသုံးပြုရပါအဆင်
ပြေစေပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ကောင်းလွန်းလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ၊ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့
အခုတစ်ခေါက်တင်ပေးလိုက်တာကတော့ အရမ်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ Phone တွေမှာအများ
ဆုံးကစားကြတဲ့ ANGRY BIRDS လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်နာမည် ကြီးနေသလည်းဆိုရင်
တော့ နေရာတကာမှာ Angry Birds ပုံတွေချည်းဘဲတွေ့နေရတာဘဲဗျာ။အခုတင်ပေးထားတာကတော့ Phone တွေမှာဆော့ လို့မရဘူးနော် Computer မှာ ကစားလို့ရတဲ့ Version လေးတင်ထားပေးတာပါ။ Phone လေးနဲ့ဆော့လို့အားမရသူတွေအတွက်တော့ PC မှာ အားရပါးရ ကစားကြပေါ့ဗျာ။
RealPlayer v.15.0.1.13 နောက်ဆုံးထွက် Version
ဒါလေးကတော့ Real Player လေးပါ။ လူတိုင်းလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လူတိုင်းလည်း
သုံးဖူးပြီးသား Player လေးတစ်မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးထွက် Version လေးမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Player လေးကလည်း Video , Audio ဖိုင် အမျိုးအစားများစွာကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။ပေါ့ပေါ့
ပါးပါးလေးနဲ့အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေပါတယ်။ File Size ကလည်း 28MB ဘဲရှိပါတယ်။
Hard Disk တွေ Memory Stick တွေကို လွယ်ကူစွာဘဲပိုင်းဖြတ်ကြမယ် (EASEUS Partition Master 9.0.0 Professional Edition)
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော် MMiTD မှာ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေတဲ့တင်ထားတဲ့Post လေးပါဗျာ။
ပေါက်ကွဲသုံစဉ်ဆိုတော့လည်း တုန့်ပြန်မှုလေးတွေကတော့ ကျေနပ်စရာလေးတွေပါ။ အရေးအ
ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးမယ့် Post လေးကတော့ EASEUS Partition Master 9.0.0 Professional Edition ဆို တဲ့ Hard Disk တွေ Memory Stick တွေကို ခွဲခြမ်းပိုင်းဖြတ်ပေးမယ့် Softwareလေးဘဲဖြစ်
ပါတယ်။ ဒီ Software လေးအကြောင်းကိုမရှင်းပြခင် ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ MMiTD မှာအခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် Post တင်တာကျဲသွားပါတယ်။ အရင်ကလောက်သိပ်မတင်ဖြစ်
ဒါလေးကတော့ Window တင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Driver တွေ ကို ရှာဖွေပြီး Auto တင်ပေး
တဲ့ Driver Genius Professional ပါ။ ကွန်ပြူတာရှိသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တွေထဲ မှာ
တစ်မျိုးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ File Size ကလည်း။ 11.66MB ဘဲရှိလို့ ဒေါင်းထားရင်လည်း မမှားပါဘူး
သူကတော့ Window XP , Window7, Window Vista အားလုံးကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။ သုံးရတာ
လည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့တင်ပေးနေကြပုံစံအတိုင်းဘဲ Full Version လေးဘဲ
(၁၅.၈.၂၀၀၆ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့ Intensity Speaking Center မှာ ဘာသာကြီးများဆိုင်ရာ
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲလေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ဦးဇင်း ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့တဲ့ စာတမ်း
လေးကို ခုမှ ပြန်ရှာတွေ့လို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်)
မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဘီစီ(၅၈၈)-က ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ
ဗုဒ္ဓရတနာ ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု
၀ါဆိုလပြည့် စနေနေ့ ဘီစီ ၅၈၈ မှာ ဓမ္မရတနာ စတင်ခဲ့သလို မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု
၀ါဆိုလပြည့်ကျော် ၂ ရက် တနင်္လာနေ့ ဘီစီ ၅၈၈ ခုမှာ သံဃာရတနာ
မိမိ ကွန်ပြူတာရဲ့ Desktop မှာ နာရီလှလှလေးနဲ့ အလှဆင်ရအောင်
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ နာရီလှလှလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Desktop ပေါ်မှာ အလှဆင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Software တွေလိုမျိုး Desktop ပေါ်မှာ တင်ပြီး လေးလံခြင်းမရှိပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ အဆင်ပြေ
ပါတယ်။File Size ကတော့ 1.82MB လေးဘဲရှိပါတယ်။
Spider Man - 2
ဒီတစ်ခေါက်လည်း Game လေးဘဲထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အများအားဖြင့်တော့
လူငယ်လေးတွေကြိုက်ကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်းရတာရော ကစားရတာပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ Game ဆိုတော့ လည်း တခြား Software တွေလို ရှည်ရှည်ဝေး
ဝေးရှင်းပြနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Format Factory 2.70 Portable Converter
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှ Converter တွေထည်းမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးဘဲဗျ
ဘာလို့အကြိုက်ဆုံးလည်းဆိုတော့ Movie ဘဲဖြစ်ဖြစ် Audio ဘဲဖြစ်ဖြစ် Convert လုပ်လိုက်ရင် မူရင်း အ
ရည်အသွေးကိုလျော့မသွားစေလို့ပါဘဲဗျာ။ Mp3 ကိုပြောင်းတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသ
ဘောကျတယ်ဗျာ။ File Size လည်း ချုံ့ သွားတယ်ဗျ။ အသံကလည်း မူရင်းအသံအတိုင်းမပျောက်စေပါဘူး။
နောက်တစ်ခု က ဘာသာစကား 56မျိုးကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။ သူ Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File အ
အမျိုးအစားတွေကလည်း စုံလင်နေတာပါဘဲဗျာ။ Window XP , Vista ,7အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Converter , Portable
wxPyDict - ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နောက်ပိုင်းလူသုံးများလာတဲ့ Dictionary
ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးထားတဲ့ Dictionary လေးကတော့ Babylon နီးပါး အသုံးများလာ
တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ Serial , Crack , Keygen , တွေတစ်ခုမှမလိုပါဘူး။ တစ်ခါတည်း Install လုပ်ပြီးသုံးရုံပါဘဲ။ သူက English မှ Myanmar ပြီး
တော့ Myanmar မှ English နှစ်မျိုးလုံးသုံးနိုင်ပါတယ်။ File Size ကလည်း 5.58MB ဘဲရှိတဲ့အတွက် အပျင်းပြေဒေါင်းကြပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ တွေ Chat သလိုမျိုးဘဲ Shift + Ctrl တွဲနှိပ်ပြီး Fontပြောင်းပေး
Corel Draw Graphics Suite X5 15.0.0 Full Version
Cbox မှာ အကိုလား အမလား မသိ (charm: CorelDraw X3 / X4 / X5 ဆော့ဝဲလိုချင်တယ် X3 ကိုပိုပြီး လိုချင်တယ်။) တောင်းထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ Corel Draw ကတော့ Graphics သမားများရဲ့လက်စွဲ Design Software တစ်မျိုးပါဘဲ။
နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Keygen ထည့်သွင်းနည်းပါ
ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။Charm ရေ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ နောက်ထပ် လိုအပ်သူများရှိရင်
Deep Freeze standard7နဲ့ Deep Freeze အသုံးပြုနည်း အပြည့်အစုံ
Deep Freeze ကိုတော့ အတော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က မသိသေးသောသူငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Deep Freeze ကိုတော့ Internet ဆိုင်တွေ နဲ့ Network Game ဆိုင်တွေမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီ Software
လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးအသုံးမပြုတက်မှာစိုးလို့ အသုံးပြုနည်းနဲ့ အသုံးဝင်ပုံများကိုပါ။သေသေချာချာလေး
Mobile Phone အတွက် နောက်ထပ် Game အသစ်များ Java Games 240x320 touch screen (2011)
ဒီတစ်ခေါက် တင်ပေးမယ် Mobile Game ကတော့ Java Games 240x320 touch screen (2011)ပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားအရ လူတန်းစားတော်တော်များ
များ Phone ကိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဖုန်းကိုင်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ လူတိုင်းမှာလည်း ဖုန်း
နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Application လေးတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖုန်းအကြောင်းသိပ်နားမ
လည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Game လေးတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။ အခု
ခေတ် ဖုန်းကိုင်နေတဲ့ လူကြီး လူငယ်မရွေး Game လေးတွေကို ကစားလာကြပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တင်
ပေးလိုက်တဲ့ Game တွေကတော့ အမျိုးအစားပေါင်း 150 ကျော် 200 နီးပါးလောက်တော့ ပါတယ်ဗျ။
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် သတ်မယ် ဖြတ်မယ် Blade and Sword (PC Game)
ဒီဂိမ်းလေးကိုတော့ ဟိုမွှေဒီမွှေ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့မထင်မှတ်ဘဲတွေ့သွားတာဗျ။ ကျွန်တော်
မဆော့ကြည့်ရသေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Screen Shoot လေးတွေကိုကြည့်ရတာ ဆော့လို့ကောင်းမယ်ထင်လို့
သူငယ်ချင်းများကစားနိုင်အောင်ပြန်တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားအောင်တော့ Screen Shoot လေးတွေတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ သူ့ရဲ့ Requirement လေးတွေလည်းရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်လို ဂိမ်းလည်း ဆိုတာ ကိုယ် တိုင်မစမ်းသပ်ဘဲနဲ့ တင်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်တော့မဆိုးကြပါနဲ့
Portable Emsisoft Emergency Kit 1.0.0.25
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ အတော်လေး
ပြသာရှာတက်တဲ့ သာမန် User တွေ ကြောက်ရွံ့ကြတဲ့ virus, worms , maware , adware , trojans ,
spyware , keyloggers , dialers စတဲ့ ကောင်တွေကို အလျင်မြန်ဆုံး နဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားရှင်း
လင်းပေးတဲ့ Antivirus Software တစ်မျိုးပါဘဲ။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
အမျိုးအစား: Antivirus , Portable , Software
WinUSB Maker 1.0 - Windows Setup to USB Solution (x86/x64)
ဒါလေးကတော့ Win USB Maker လို့အမည်ရတဲ့ Software လေးတစ်မျိုးပါဘဲဗျာ။
ဒီကောင်လေးကို ဘယ်လိုနေရာတွေများအသုံးပြုကြလည်းဆိုရင် Window ကိုအခွေနဲ့မတင်ဘဲနဲ့ USB နဲ့တင်ချင်သူများအတွက်အထူးရှယ်ပေါ့ဗျာ ။ နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကိုတင်ပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်လို့ ဒီကောင်လေးက Window 8 ကိုတောင် Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: USB Software , Window
USB Safely Remove v4.7.1.1153
ဒါလေေးကတော့ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ USB Safely Remove လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်စပ်အသုံးပြုနေတဲ့ Memory Stick , External Hard Disk , Card Readers , နဲ့ Phone , Mp3 , Mp4 စတည့် အရာတွေအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အသုံးပြုရ
အဆင်ပြေအောင် Full Version လေး တင်ပေးထားပါတယ်။ Crack ဖိုင်လေးကို ကူးပြီး Install လုပ်ထားတဲ့ Folder ထဲကို ကူးထည့်လိုက်ရင် Full Version လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: USB Software
Desktop ကို ဒီဇိုင်း လှလှလေးနဲ့ ထားချင်သူများအတွက် Winstep Xtreme လို့ အမည်ရတဲ့ Theme လန်းလန်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ တော့ Theme လေးတွေစုံပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက် တဲ့ Theme လေးကိုပြောင်းသုံးရုံပါဘဲ။ Internet ရှိသူတွေအတွက်ကတော့ အရန်သင့် Theme ပေါင်းများစွာကို Download ဆွဲပြီး သုံးလို့ရမှာပါ။
Nokia Phone ရှိတဲ့သူတွေအတွက် Game ပေါင်း 31မျိုး
အခုတစ်ခေါက်လည်း Nokia Phone တွေအတွက်ဘဲထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
အခုတစ်ခေါက်ကတော့ Game ပေါင်း 31 မျိုးပါဗျာ။ အောက်မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား
တွေကို ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါ
Windows xp,Vista and7Right Click မှာ Function ထပ်ဖြည့်နည်း
ဘလော့မိတ်ဆွေများအတွက် အခုကျနော်တင်ပြပေးမည့် နည်းလမ်းလေးကတော့ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာအ သုံးပြု နေတဲ့မိတ်ဆွေ များအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ. ဒါကတော့ FileMenu Tools 6.0.1 လို့ ခေါ်တဲ့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်မှာ Right Click အတွင်းမှာ မိမိတို့ အလိုရှိရာ program software တွေကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်. အသုံးပြု ထည်းသွင်းနည်းကို ကျနော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနှင့် အနီးစပ်ဆုံးရှင်းလင်းဖေါ်ပြပေးသွားပါမယ်.
Run box အတွင်းမှ အသုံးတည့် Search key များ
အားလုံးဘဲ အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထားတာကတော့ အများကြီးဘဲ ကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့ကို နည်းနည်း နည်းနည်း လေ့လာသွားရင်တော့အကျိုး
1. Run (box) ကိုဖွင့်ဖို့ရာ မခက်ပါ။ Windows logo key+ R ကီးကို နှိပ်လိုက်ပါ
2. Windows7မှာ Start > Search (search programs and files) (box) ကိုသုံးပါတယ်။
Gmail Account ကို ကြိုက်သလောက်သာဖန်တီးကြပေတော့ဗျာ
Gmail Account အသစ် လုပ်ချင်ပါသလား ?
Gmail Account Disable ဖြစ်နေလို့လား ?
Gmail ၀င်ရင် Verification Phone number တောင်းနေလို့လား ?
လုံးဝ စိတ်ညစ်နေစရာမလိုပါ ။ အောက်မှာဖေါ်ပြထားသော နည်းအတိုင်းသာ လုပ်လိုက်ပါ ။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည် ။
အရင်ဆုံး မြန်မာပြည်ကဆိုရင် ဒါလေးအရင် ဒေါင်းယူထားလိုက်ပါ
KM Player 3.1.0.0
ဒီတစ်ခါတော့ Player လေးတစ်ခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက
လည်းသူ့အစွမ်းအစနဲ့သူဘဲဗျ။ ရှေ့မှာ တင်ပေးခဲ့တဲ့ GOM Player တို့ MPC တို့ တွေ Support
မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Type တွေကိုတောင် ဒီကောင်လေးက Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်
လေးကလည်း ကြည်လင်နေတာပါဗျာ။ Player ဆိုတော့ သိပ်ပြီးရှင်းပြပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောက်
ဆုံး Version လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Malwarebytes Anti-Malware 1.51.2.1300 Full Version
Post မတင်ဖြစ်တာတော့ 1လလောက်ရှိသွားပြီဗျာ။ အခုမှဘဲပြန်တင်ဖြစ်တော့တယ်။
ကွန်ပြူတာမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို နှေးကွေးသွားအောင် ပြသာနာရှာတက်တဲ့ Malware , Spyware,
Trojan , Worm အစရှိတဲ့ ကောင်ပလောင်တွေကို အစအနမကျန်အောင် ရှင်လင်းပေးတဲ့ Software
လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့ လွယ်ကူပါတယ်။ Perform Full Scan ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်သူ
Internet Download Manager v6.08 Build9နောက်ဆုံးထ...
Install ပြုလုပ်မရသော Software များကို Advanced In...
Sothink SWF to Video Converter V2.4 (Full Version)...
Oxford English Dictionary (Portable) with Pronunci...
Hard Disk တွေ Memory Stick တွေကို လွယ်ကူစွာဘဲပိုင်...
မိမိ ကွန်ပြူတာရဲ့ Desktop မှာ နာရီလှလှလေးနဲ့ အလှဆင...
wxPyDict - ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နောက်ပိုင်းလူသုံးများ...
Deep Freeze standard7နဲ့ Deep Freeze အသုံးပြုနည်...
Mobile Phone အတွက် နောက်ထပ် Game အသစ်များ Java Gam...
ခုတ်မယ် ထစ်မယ် သတ်မယ် ဖြတ်မယ် Blade and Sword (PC ...
Windows xp,Vista and7Right Click မှာ Function ထပ...
Malwarebytes Anti-Malware 1.51.2.1300 Full Versio...